'पत्रकार निष्पक्ष हुन्छन् कि हुँदैनन्?'
पत्रकारिताका प्राध्यापक पी खरेलले आजभोलि यस्तै प्रश्न सामना गर्नुपरेको छ। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टको पुस्तक 'नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता' सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्यक्रममा बिहीबार खरेलले यस्ता टिप्पणी आफूले सुन्ने गरेको बताए।
'पत्रकारको विचार हुने भएकाले ऊ निष्पक्ष हुन सक्दैन', खरेलले भने, 'पत्रकार निष्पक्ष हुन्नन् भन्ने होइन। न्यायाधीश हुन्छन् भने पत्रकार पनि हुन्छन्।'
प्राध्यापक खरेलले न्यायाधीशले सपथ लिएकै भरमा निष्पक्ष हुने हो भने पत्रकार महासंघले सपथ दिए लिन तयार रहेको बताए। उनले न्यायाधीशहरु झगडियाको भोजमा नगएजस्तो पत्रकारहरु पनि जान नहुने तर्क गरे। पत्रकारितामा राजनीतिकरण भएको पनि उनले दुखेसो गरे।
'पार्टी पत्रकारिताबारे अब छलफल हुनुपर्छ। संघर्षका दिनमा पक्ष थिए होलान् तर अब लोकतन्त्र आयो, निरन्तरता दिने कि नदिने?' उनले भने।
उनले कानुनी रुपमा नेपालमा बेलायत, अमेरिका, जर्मनी र भारतमा भन्दा बढी प्रेस स्वतन्त्रता रहेको तर व्यवहारमा नभएको तर्क गरे।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले पनि 'निष्पक्षता'माथि टिप्पणी गरे। 'हरेकले जवाफदेही हुनुपर्ने मिडियाले हुन किन नहुने? मिडिया ट्रायलबाट मानिस आक्रोशित छन्', शर्माले भने, 'बिग कर्पोरेट हाउसबाट मिडिया कन्ट्रोल हुँदा मिडियाको स्वतन्त्रता क्षय हुने कि नहुने?'
उनले पत्रकारिताको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाए। 'भ्याट छली प्रकणमा नेपालको मिडियामा कुनै समाचार आएन। विदेशको एउटा अनलाइनले लेख्यो। म न्यायाधीश हुँदा कुनै कर्पोरेट हाउको मुद्दामा 'सो कज' आदेश हुँदा मात्र पनि पत्रिकामा समाचार आउँथ्यो - सरकारलाई झापड भनेर। अनि त्यो रिट खारेज हुँदा समाचार आउँदैनथ्यो। मिडिया बिग कर्पोरेटबाट सञ्चालन हुने अवस्था छ', शर्माले भने।
पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विष्टले पुस्तकमा लोकतन्त्र पछिका अवस्थामा नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे उल्लेख रहेको बताए। प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयबाट बिष्टले विद्यावारिधी गरेका छन्। उनले आफूले थेसिस गरेको विषयलाई परिमार्जन गरेर पुस्तकको रुपमा प्रकाशित गरेका हुन्।
पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने पत्रकारिताको निष्पक्षतामाथि टिप्पणी गरेनन्। 'निष्पक्ष भन्ने कि ... सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ', देउवाले भने, 'समाचार सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ। नभए मानिस मिसलिड भएर अन्याय हुन जान्छ।'
उनले नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको उल्लेख गर्दै निर्धक्कसँग पत्रकारले लेख्न सक्नुपर्ने बताए।
संकटकालको समयमा प्रेस माथि भएको आक्रमणबारे आफूले पुस्तकमा पढ्न चाहेको उनले खुलाए। अन्यत्मा प्रधानमन्त्रीले भने - 'आफ्ना कुरा लेख्न पाउनुपर्छ।'
प्रकाशित मिति: बिहिबार, असार २२, २०७४, ०६:१४:४४